दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ गते हुने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दोस्रो चरणको निर्वाचको मिति तोकेको हो । प्रदेश नम्बर १, २, ५ र…
चन्चल स्वभावकी निहारिका रात्रिबस चढेर पे्रमी अनुरागको आग्रहमा उनले निम्तो गरेको स्थानतर्फ जाँदै थिईन् । लामो यात्रापछि बस एकाएक घ्याच्चककककक ..........रोकियो, “ इन्द्रसरोवर जाने बाटो आयो ल......... ल............ उत्रिनुस्” । कन्डक्टरको कर्कश स्वरले स्वप्निल दुनियाँमा हराईरहेकी निहारिका एक्कासी झल्याँस्स भईन्…
गजल - "जिन्दगी क्रेडिट कार्टमा" - गौतम सागर राइ कोलोराडो, अमेरिका
गजल जिन्दगी क्रेडिट कार्टमा घोटिएको छ जिन्दगी क्रेडिट कार्टमा घोटिएको छ किन सबैको नजर म संग ठोकिएको छ। साथी संगी भन्छन आउ देश बनाऔँ हामी तर आमाको मुस्कान घाम सँग पोखिएको छ। के का लागी दौडिन्छन् सडकभरी मान्छेहरु हतारछ भन्दै…
दमको विमारले बर्षौ देखि ग्रस्त थिए सन्तराम काका । अघिल्लो दिन बेलुकी एकछिन म पनि भेटेर फर्केको थिँए विरामी काकालाई । बिहान झिसमिसेमा एक्कासी सन्तराम काकाको घरमा रूवाबासी सुनियो । पक्कै पनि सन्तराम काकालाई बढी च्यापेको हुन सक्छ दमले भन्ने…
भावना पाठक आमा, म आज सात इन्च लामो भए । मेरो सरिरमा सबै अंगहरु छन् । सबै अंग चलाउन सक्छु । मैले तपाइको आवाज पनि चिन्न थालेको छु । तपाइको आवाज धेरै मिठो लाग्छ मलाई । तपाइको प्रत्येक आवाज संगै…
कविता - 'हेप्पी होली' - गंगाजंग सिंह, हुम्ला
घाम र पानी संगै भए इन्द्रेणीको धनुस मित्र । रंग र पानी संगै भए होलिखेलको सगुन मित्र।। छतमा बसि लोला हान्न विछ्ट्टैको मज्जा मित्र । आउने जाने बटुवालाई अन्जानैमा ठट्टा मित्र । रंग छेक्ने रक्षक बन्छ कालो चस्मा लगाउ मित्र…
कविता - 'मेरो आग्रह' - सानु मगर, कपिलवस्तु
कविता 'मेरो आग्रह' आउ नेपाली जुटौं अब सबै एक हौं शान्तिको किरण ल्याउनु छ नमाने है धौ। एक अर्काको रिसरागमा बिग्रीयो नेपालको विधि समाजासेवामा जुटौं नगरौं भो अब फोहोरो राजनिती। पार्टी भन्दै हिडे कति दुखमा साथ कसैले पाउदैन राजनिको शासनले…
अनाथ भएका त्यो क्षण कृष्ण के.सी. " मेरो मुख देख्ने मन भए यो पत्र पाउन साथ त्यहा खाएर यहा चुठ्न आउनु l " …
एउटै संयोग दुई २०१७ ! - प्रेमबहादुर शाही
एउटै संयोग दुई २०१७ ! प्रेमबहादुर शाही कहिले काही यस्तो संयोग हुन्छ ! जो कसैले पनि कल्पना गरेको हुदैंन । वर्तमानको परिवेशले विगतको परिवेशलाई सम्झन बाध्य बनाउँछ । इतिहासका कुनै पनि कालखण्डहरु कुनै सम्झन योग्य हुन्छन, भने कुनै कालखण्डहरु सम्झन…
ती केटी - समीर बेल्बासे
समीर बेल्बासे (न्युदिल्ली) नचिनेको नै किन नहोस्, बिरानो ठाउँमा आफ्नो देशको मान्छे भेटेपछि छुट्टै आनन्द मिल्दो रहेछ। अस्ति त्यस्तै भयो।लालकिल्ला र ईन्डियागेटको अवलोकन पश्चात होस्टेल तर्फ लाग्दै थिए।समय साझँँको ७ः३० भैसकेको थियो। दिल्लीको मेट्रो रेलबाट बोटानीकल गार्डेनमा उत्रिएपछि ग्रेटर नोएडामा…